YEYINTNGE(CANADA): Thursday, September 23
Trouble Brewing With Burma?
September 22, 2010By Jason Miks
China is an increasingly unwelcome presence in Burma,anew ICG report suggests.
Image credit:Franz Patzig
While I'm traveling I askedafew China watchers to share their thoughts on some subjects of interest. Here'saguest entry by Kelley Currie,asenior fellow with the Project 2049 Institute.
These feelings have intensified over time as Chinese investment in Burma has grown beyond an influx of petty traders to include large-scale energy and infrastructure projects, which are often built with imported Chinese labour and are perceived as primarily benefiting Chinese interests. Beijing's cozying up to the hated junta has also not helped China's image with average Burmese.
The ICG report contends that since the August 2009 border incident, in whichasurprise Burma army attack on ethnic forces in the Kokang area resulted in massive refugee flows into China, Beijing more and more regards these fractious ethnic groups — some of whom are ethnically Chinese — asaliability instead of seeing them as the strategic buffer it once did. Moreover, these ethnic communities have been among the worst affected by Chinese development projects and are increasingly bitter about the manner in which China has carried out economic activity in their already grim environs. As Beijing's concerns about border stability and economic interests come into greater tension, China likely will find itself tempted to abandon completely the Kachin, Wa and other marginalized armed ethnic groups with whom it has long-standing relations, and throw its lot in with the Burmese regime's scorched earth approach to these communities.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/23/20100အကြံပြုခြင်း
23 September 2010 ဒိုင်ယာရီ
23 Sep 2010 Yeyintnfe's Diary
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ တွင်ကျဆုံးခဲ့ကြသော ရဟန်းရှင်လူများအတွက်အမျှပေးဝေမည်
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၊ တွင်ကျဆုံးခဲ့ကြသော ရဟန်းရှင်လူများကို ကျွတ်လွတ်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာ ဆွမ်း၊ဆေး၊ကျောင်း၊သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှုဒါန်းအမျှပေးဝေမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်အထက်ပါလိပ်စာအ
ကုလ အထွေထွေညီလာခံ တွင် နိုင်ငံတွင်းဆင်း ရဲမွဲတေမှု တိုက် ဖျက်မည် ဟု ပြောခဲ့ပြီးဆင်းရဲသား များကလိုက် လံဖမ်းဆီး
ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များတွင် ပေါ်တာ ဆွဲ သလို တွေ့ သမျှလူအကုန်ဖမ်းနေ
September 23, 2010 freedom news group
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက ကုလ အထွေထွေညီလာခံ တွင် နိုင်ငံတွင်းဆင်း ရဲမွဲတေမှု တိုက်
ဖျက်မည် ဟု ပြောခဲ့ပြီး နာရီပိုင်း အကြာတွင် လှိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သာ၊ အင်းစိန် နှင့် မြောက်ဥက္က
လာ ပ မြို့ နယ်များ မှ ဆင်းရဲသား များ နှင့် အခြေအနေမဲ့ရ သူ အချို့ ကို စည်ပင် ရဲ များ သုံးသည့်
ကားများ ဖြင့် လိုက် လံဖမ်းဆီး သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ယမန် နေ့ ည ၁၁ နာရီခန့် က လှိုင်သာယာမြို့ တွင် ညဘက်ဈေးရောင်းသူ အချို့ နှင့် ဘောလုံး
ပဲ ကြည့်ပြီး အိမ်ပြန် လာသူ အချို့ ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီး ၊မြောက်ဥက္ကလာ ခြောက်ကွေ့ နှင့် အဝေး
ပြေးဂိတ်များ မှ အိမ်ခြေမဲ့ အချို့ ကို လည်းဖမ်းဆီးသွားသည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ရွှေပြည်သာတွင် ဒေသခံ များ က ပေါ်တာဆွဲ သည် ဟု ပြောကြပြီး လူငယ် နှစ်ဆယ်ခန့် ဖမ်း
ဆီးခံရသည်။နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက် ပွဲ နီးလာပြီ ဖြစ်သဖြင့် ရဲစခန်း များက ပြစ်ဒဏ် ဟောင်း
ရှိခဲ့ဖူးသူ အချို့ ကို လည်း လိုက်လံဖမ်းဆီးနေသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကို တိုက်ဖျက်ရာဉ် ဆင်းရဲသူများ နှင့် တောင်းစားသူများကို
ဖမ်းဆီးထောင် ချခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းလေ့ရှိသည်။
The Peaceful Protest In front Of India Embassy And Burmese Embassy(09/18/2010) Washington D.C.
၈၈၈၈ ကို အကြောင်းပြုလို့
လူပင်လယ် နဲ့ သွေးကွက် အိုင်
သေနတ်ကိုင်ထား တဲ့ စစ်တပ်
မွဲနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ရိုင်းပြစွာဆက်ဆံခဲ့တာ
တွေးချင်စရာ မရှိပါဘူး .....။
ကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျခဲ့တယ် ၊
လူတွေကို သတ်ပြခဲ့တယ် ၊
သံဃာတွေကို ဦးခေါင်းကို ရိုက်ခွဲခဲ့တယ် ။
ဒါတွေကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့ပြီး
ကြိုးဆွဲရာ ကကြမှာလား............. ။
ပါတီကို အကြောင်းပြု လူတစ်စုကလည်း
ဒီလမ်းအမှန် ဒီမိုကရေစီကို ချဉ်းကပ်ပြန်သတဲ့ ။
ညဏ်မပါ ပလီပလာ အတတ်တွေနဲ့
သူ့အဆိပ်က သတ္တ၀ါတွေ သေကြေစမြဲ သာပ
ဖွေရှာကာ တွေးကြပါတော့ ----။
ငါတို့ အမျိုးတွေ သူခိုးတွေ ချည်းပါဘဲလို့
ကြွေးကြော်လို့ မာန်ဝင့် ချင်စရာ
သြော် မြန်မာပြည်ရယ် ဂုဏ်ယူစရာ
သူတောင်းစားတွေ ချည်းပါဘဲ ...........။
သူရဲကောင်း တံဆိပ်တွေ ရင်မှာ ချိတ်ပြီး
သေနတ်တွေ ခါးမှာ ထိုးထားပေမယ့်
ကြောက်စိတ်တွေ ကတော့ သြချလောက်ပါပေတယ် ။
မိန်းမတစ်ယောက်ကို ရန်ရှာကာ ချုပ်ချင်တော့
အတင်းတွေ လည်ကာ တုတ်တာဖြင့်
အရှက်တရား ရယ် ကုန်ခမ်းနေပုံက
ပခုက္ကူမှာ အခြေပြုလို့ လူ့မိစ္ဆာ လူတစ်စု
အမျိုးဖျက်မည့် အကြံနှင့် ထိုးနှက်မည်ကြံလာ ကြသည် ။
၀မ်းစာအရေး ပင် ခက်နေသေးတာရယ်ကြောင့်
ဒကာတွေ ပြေလည်စေ ကြောင်းသာပ
မြန်မာပြည် သာသနာ လွှမ်းလိုက်ပုံက မေတ္တာသုတ်ရွတ်တာ
ရှင်ရဟန်း မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဖမ်းချုပ်ကြတာ ........။
သြော်... တကယ်ပါလေ ဆက်ကာ မရေးချင်ဘူး
ဤမြေမှာလေ တက်ကာ ကြွေးကြော်လိုက်ချင်တာက
ရရာ လက်နက်ကိုင်ကာ စွဲလို့
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ တွင်ကျဆုံးခဲ့ကြသော ရဟန်းရှင်လူများအတ...
ကုလ အထွေထွေညီလာခံ တွင် နိုင်ငံတွင်းဆင်း ရဲမွဲတေမှု ...
The Peaceful Protest In front Of India Embassy And...